Onja fohy - Wikipedia
Ny onjam-peo amin'ny onja fohy dia fampitana fampahalalana amin'ny alalan'ny hatetik'onja 1,6 hatramin'ny 30 MHz, izay eo ambonin'ny onja afovoany. Ny onja fohy dia ampiasaina amin'ny fampitana avy lavitra amin'ny alalan'ny onjan-danitra izay mampiasa ny soson-drivotry ny tany ho toa fitaratra ho an'ireo onja. Ampiasaina amin'ny fampielezam-peo ny onja fohy ary koa amin'ny fifandraisan'ny sambo ary fiaramanidina, na koa amin'ny fifandraisana amin'ny toerana tsy takatry ny tambajotra pinday na tsy manana telefaona an-tariby. Azo ampiasaina amin'ny fanabeazana na ho an'ny famonjena ny onja fohy.
Nanokana valan-katetik'onja ho an'ireo sampan-draharaha maro samihafa ny Zaikabe Erantanin'ny Fifandraisana amin'ny Onja (World Radiocommunication Conference, WRC) miaraka amin'ny Vondrom-pifandraisan-davitra Iraisam-pirenena (International Telecommunication Union, ITC). Tamin'ny taona 2007 no nanatanterahana ny zaikabe farany.
Tamin'ny WRC-97 tamin'ny taona 1997 dia natokana ho an'ny fampielezam-peo iraisam-pirenena ireto valan-kalava ireto. Misy elanelana 5 KHz amin'ny hatetik'onjan'ny onjam-peo roa mifanakaiky hatetik'onja.
75 m 3.9–4 MHz Zaraina amin'ny valan-kalavam-pankafy 80m
41 m 7.2–7.6 MHz Zaraina amin'ny valan-kalavam-pankafy 40m
31 m 9.4–9.9 MHz Valan-kalava ampiasaina indrindra ankehitriny
15 m 18.9-19.02 MHz Saika tsy ampiasaina, mety atao ho valan-kalava DRM
11 m 25.6-26.1 MHz Azo ampiasaina amin'ny valan-kalava ampielezana DRM
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Onja_fohy&oldid=970423"
Dernière modification le 24 Aprily 2019, à 04:19
Voaova farany tamin'ny 24 Aprily 2019 amin'ny 04:19 ity pejy ity.